Typhoon disrupts Asia Internet, telephone service | Myanmar Weather and Natural Disaster Informations
Typhoon disrupts Asia Internet, telephone service
August 27, 2009 — mmweather
ထိုင်ဝမ်တယ်လီဖုန်းကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Chunghwa Telecom ရဲ့ သတင်းတစ်ပုဒ်မှာ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း Morakot ကြောင့် Bashi ရေလက်ကြားမှာရှိတဲ့ ပင်လယ် ရေအောက် ကေဘယ် ၇ ကြိုးပြတ်တောက်သွားတာကြောင့် အင်တာနက်/တယ်လီဖုန်းအဆက်အသွယ်တွေ နှေးကွေးသွားရကြောင်း သြဂုတ်လ ၁၄ ရက်နေ့က ကြေငြာခဲ့ပါတယ်။ Voice calls and Internet data traffic တွေကိုတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ သောကြာနေ့ ၂၁ ရက်နေ့က ပြန်ရ ပြီလို့ ပြောပါတယ်။
တစ်ချိန်ထဲမှာဘဲ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံက Tele-communication ကုမ္ပဏီကြီး ၂ ခု Long Distance Telephone Co. and Globe Telecom Inc. ကလည်း အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ တယ်လီဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများနဲ့ Broadband services တွေ တချို့တဝက် ရပ်ဆိုင်းသွားကြောင်း ထုတ်ပြန်ကြေငြာခဲ့ပါတယ်။ သြဂုတ်လ ၁၂ ရက်နေ့ကတည်းက စပြီး တရုတ်ပြည်၊ ဟောင်ကောင်၊ ဂျပန်၊ တောင်ကိုရီးယား၊ ထိုင်ဝမ်၊ မလေးရှား၊ စင်္ကာပူနဲ့ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတွေကို ဆက်သွယ်ထားတဲ့ ပင်လယ်ရေအောက် ကေဘယ်တွေ မုန်တိုင်းကြောင့် ပြတ်တောက်သွားခဲ့တာဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြုပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Chen Hui-yen ဆိုသူ Chunghwa Telecom ရဲ့ အရာရှိတစ်ဦးက မပြတ်တောက်ပဲ ကျန်ခဲ့တဲ့ ကေဘယ်အချို့နဲ့ ပြောင်းလဲ အသုံးပြုနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် အင်တာနက်သုံးစွဲမှုနဲ့ voice call တွေကို ကေဘယ် လမ်းကြောင်းပြောင်းအသုံးပြုနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်း အခုလိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ် … Chen Hui-yen, an official at Chungwa, said the disruption to communications had been contained as Internet traffic and voice calls were rerouted to other cable networks. Most international Internet data and telephone calls are transmitted as pulses of light via undersea fiber-optic cables that crisscross the globe. Many cables have “redundancy” —atechnical term that means havingabackup cable that takes over if the main cable is damaged or completely fails….
စင်္ကာပူနိုင်ငံရဲ့ အရှေ့တောင်အာရှက အကြီးဆုံး Singapore Telecommunications Ltd. ကုမ္ပဏီကတော့ အခြား ကေဘယ် စံနစ်တွေနဲ့ပြောင်းလဲ အသုံးပြုနိုင်မှုကြောင့် သူ့ရဲ့ တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်မှုစံနစ် ၉၅% ကို ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ပြီလို့ ဆိုပါတယ်။
Undersea Internet Cables Undergoing Repairs After Typhoon Dan Nystedt, IDG News Service
Aug 14, 2009 3:20 pm
The APCN2 (Asia Pacific Cable Network, number two) was damaged in at least two places, said Chen Hui-yen,adeputy director at Chunghwa’s network management division. One part, which runs between Singapore and Malaysia, was fixed Friday morning, she said, whileaportion of the cable near Taiwan has not been repaired yet, althoughateam has been dispatched to the location.
The five other undersea cables damaged near Taiwan by Morakot were the SWM-3 (Southeast Asia – Middle East – Western Europe 3), the APCN (Asia Pacific Cable Network), C2C Cable Network East Asia Crossing (EAC), C2C Cable Network (C2C) and FLAG (Fiber Optic Link Around The Globe) North Asia Loop (FNAL).
Taiwan’s Council of Agriculture estimates the typhoon destroyed NT$10.67 billion (US$324.3 million) of crops and other goods, including tens of thousands of livestock such as pigs, chickens and ducks.
Posted in Weather News. Tags: mmnews, morakot, weather. LeaveaComment »
« Typhoon Morakot leaves 461 deaths
Taiwan confirms 543 dead, 117 missing after typhoon »